Zidane oo ka jawaabay eedeyntii uga timid Isco ka hor kulanka Las Palmas – Gool FM
Zidane oo ka jawaabay eedeyntii uga timid Isco ka hor kulanka Las Palmas
Liibaan Fantastic March 30, 2018
(Madrid) 30 Maarso 2018 Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinadine Zidane ayaa u jawaabay kubadd abuuraha reer Spain ee Isco.
Laacibka ayaa qaab ciyaareed fiican soo bandhigay kulamadii xulka Spain uu ka hortagay Germany iyo Argentina, wuxuuna kadib sheegay inuusan haysan kalsoonida tababaraha reer France.
Tababare Zidane ayaa sheegay inuusan ahayn shaqsi dulminaya Isco balse uu yahay tababare laga doonayo inuu garoonka soo galiyo kaliya 11-laacib xili dhamaan ciyaartoyda kooxdu ay doonayaan inay ciyaaraan.
“Ma dulminayo Isco, qof walba sidii uu doono ayuu u fasiran karaa warkii uu yiri, laakiin wuxuu si cad u sheegay inuusan faraxsanayn maadaama uusan halkaan ku haysan xiddignimo” ayuu yiri tababare Zidane ka hor kulanka Las Palmas.
“Isco ani ahaan wuxuu ii yahay laacib muhiim ah, si walba aan u soo muujiyo inuu muhiim u yahay kooxda wuxuu doonayaa inuu inbadan ciyaaro laakiin dareenkaas waa mid ay wada qabaan dhamaan ciyaartoyda”.
“Shaqadaydu waa inaan soo xusho 11 laacib, Isco aad ayuu muhiim iigu yahay sidaas ayuuna ii ahaan doonaa, ugu danbayntii qof walba sidii uu rabo ayuu u fasiran karaa hadalkiisa laakiin anigu kama xumaan”.
Fabio Capello oo kusoo biiray musharrixiinta xulka Talyaaniga!